Soomaali, jecel in uu adiga mar walba kula wadaago aragtiyo toolmoon oo maangal ah.
XAFIISKII HOWLGABKA AHAA.
|||||Ficilada hagardaamada ku a ah waxbarashada gabdhuhu waxay u baahanyihiin in la suuliyo!!!!!!!!!!
Wali waxaa dhab ah in ay jiraan afkaar lid ku ah waxbarashada gabdhaha.
waxaan fadhinaa xarun ganacsi, waxaa madasha wada fadhiya dad badan, maadaama ay qorax u jeed tahay dadku wuxuu ku wada gabaday meel ka daahan qoraxda. waxaa madal wadaag nala noqday hooyo ay dadka badi garanyeen. waxa ay sheeko dheer yeesheen mid ka mid ah hooyooyinkii fadhi wadaaga nala ahaa, is waraysi dheer dabadii hooyooyinku waxay iska waraysteen xaalada waxbarasho ee carruurtooda ilaa heer hoose, malaha waxay ahaayeen hayb wadaag? mooji.
mid ka mid hooyooyinka ayaa waydiisay hooyadii labaad ka warran gabdhiii hebla ahayd? waxa ay ugu warbixisay hebla waxa ay gaadhay dugsi sare Alle mahadii. Hooyadani waxa ay u muuqatay mid ay macno wayn ugu fadhido kuna faraxsan waxbarashada gabadheeda, laakiin waa tan mida isoo jiidatay aniga iyo asxaab kale oo fadhi wadaag nala ahayd, waa jawaabta hooyadii labaad, waxay tiri:" hebla marka hore ogoow xog ogaalnimadii dadkii hore, waxaadna niyada ku haysaa oraahdii ahayd "dad waa kii hore hadalna waa intii uu yiri". Waxa aan is waydiiyey maamadu maxay soo wadaa? Laakiin fajac ayaa dhacay.
waxa ay tiri: hadal horaa ahaa
**ninkii gabadhiisa geel ka raboow
**iskuulka ka gaar intaysan galin
wuxuu ahaa hadal macno badani ku duugan yahay muujinayana in ay wali jiraan afkaar lid ku ah waxbarashada gabdhaha.
*Waxbarashada gabdhuhu waa aasaaska qoys tayo leh.
|| Cabdiraxmaan Guure LeexLeex
Akhristayaasha sharrafta badanoow , marka horre waxa aan idin lee yahay Asalaamu calaykum Waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
Salaan dabadeed aan kula wadaago nuqulkan aan diirada ku saari doono suurta galnimada dib u noqoshada noolaha hoygiisii ka hayaamay.
Noolaha oo dhan ayaa caan ku ah hadba in uu ka fakado halka uu ka waayo cunto, biyo, iyo badbaado. Mararka qaar ayey noolayaashu socdaalaan, waliba socdaal dheer iyaga oo raadinaya biyo, xilliga abaaraha, laakiin haddii dhulkoodii uu roobsado waxa ay noolayaashu caan ku yihiin in ay dib ugu soo laabtaan halkii ay ka hayaameen. Waa tan aan soomaalideennii hore dhaxalka uga helnay “lama huraan waa cawska jiilaal”. Sidaas oo kale haddii ay nooluhu waayaan wax ay quutaan waxaa khasab ah in ay hayaamayaan si ay u raadshaan cunto. xaqiiqda ayaa ah marka dhulkoodii barakoobo in ay dib u laabanayaan. Arrin kale ayaa u wehelisa noolaha raadinta biyaha iyo baadka, waana badbaadada. Haddii nooluhu uu waayo badbaado waxaa khasab ah in uu ka hayaamayo halkii uu daganaa, uuna u hayaamayo meel uu badbaado/nabad ka helayo isaga oo aan eegayn dookh kale, sida nolosha halka uu u hayaamayo iyo la qabatin keeda.
Dawladii soomaaliyeed ayaa dhacday, jaahwareer siyaasadeed ayaa bilowday, waji kale ayey lasoo baxday noloshii dalku. Waa waji ku oranaya, haddii aad badbaado rabtid halkan ka carar. Loo qaadan waa ayaa dhacay. Ayaamihiin baraaraha ayaa gabogabo fool xun ku dhammaaday. Marka laga yimaado sadbursigii aadanaha, waxaa la waayey biyo,baad iyo badbaado. Waa inta nooluhu la’aantood aanu noolaan Karin. Dadkii ayaa u qaybsamay kuwo dalka gudihiisa ku barakacay, oo goobo badbaado leh tagay, iyo kuwo dalka ka qaxay oo dibadda magangelyo u raadsaday.
Moorgan, maroodi u dhashay Soomaaliya, colaadaha ayaa barakiciyey. Maarso 2016 ayaa dib cilmi baarayaal u xaqiijiyeen in uu ku laabtay dalkiisii. Kaliya maalin iyo bar ayuu ku qaatay gudaha Soomaaliya. soo laabashadiisa ayaa astaan u ah in uu aaminsan yahay in uu badbaadi doono haddii uu dalkiisii booqasho ku tago. Cilmi baarayaashuna waxa ay sheegeen in tani ay calaamad u tahay in amnigu soo wanaagsanaanayo.warbaahintu waxa ay summad ka dhigtay “Maroodi ayaa Soomaaliya u gudbay oo badbaaday”. Tani waa astaan ku tusaysa in aadunuhu uu sida maroodigaas indhaha ku hayo suurtagalnimada badbaadadiisa haddii uu laabto.
New york times(www.nytimes.com)
Dhaqan dhumay iyo dhalanteed bilowday oo ay dhalintu horboodayso.
Dhamaan ammaan oo dhan waxay u sugnaatay Allaah (SWT) ee nagu manaystayn nimcooyin badan oo aan xisaab lahayn iyo Rasuulkiisii suubanaa Muxamed (CSW). Intaa kadib waxaan salamaynaa guud ahaan Muslimiinta gaar ahaan kuwa Soomaliyeed.
Asallaamu Calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu.
Waxa aan halkaan idiin kusoo gudbin doona Qormo ka hadli doonta dhaqanka Soomaliyeed anagoo kala ah labada Qoraa ee Qoraa Cabdiqaadir Ibraahim Axmed ( Kambale ) iyo Qoraa Cabdiraxmaan Maxamed Warsame ( Guure ) ee ka bogosho wacan.
Waa Maxay dhaqan?.
Dhaqan waa astaamaha iyo aqoonta ay bulsho meel degan ay leeyihiin iyadoo laga eegayo dhinac walba sida Luuqada,diinta,fikirka,cadaadka bulshada,fanka iyo suugaanta. Dhaqanku waa muujiyaha jiritaanka bulsho ay udhamaystiran yihiin wax walba oo ay bulsho meel dagani leedahay sida Luuqad ay ku wada hadlaa ,diin ay wada aaminsanyihiin iyo hab suugaaneed ay wax u wada curiyaan.
Dhaqanku waxaa uu qeexaa is ku xirnaanta iyo midnimada ka dhaxaysaa bulsho walba oo isku dhaqan ah.
Dhaqanka soomaliyeed waa dhaqan guun ah oo facwayn waa dhaqan in mudo ah soo jiray laguna tirayo inuu yahay mid kamid ah dhaqamada ugu filka wayn dunida,sidoo kale waa dhaqan inta badan waafaqsan shareecada islaamka.
Dhaqanka soomaliyeed waxaa u kulansaday laamaha laga rabo in dhaqan walba uu lahaado,sida Luuqad,diin,suugaan,fan,cadaad bulsho,hab fikir iwm.
Dhaqanka soomaliyeed waa dhaqan gudbinaya akhlaaq fiican,fikir balaaran,wadaniyad iyo dal jacayl. Sidoo kale dhaqanka soomaliyeed waxaa uu siwayn u ixtiraamaya Diinta islaamka isagoo inta badanba waafaqa oo ay yartahay inuu Ka horyimaado.
Dhaqanka soomaliyeed waxaa uu dhiiri galinyaa in la aamino dhulka hooyo oo aan marnaba laga tagin laguna badalan dhulal shisheeye. Bulsho waliba inta ay dhaqankeed taqaan ayay tariikhdeeda iyo jiritaankeeda taqaan,dhaqanku soomaliyeed waa u taaganaha jiritaankeena ummadnimo iyo na baraha faa,idada dalkeena.
· Asal guurka dhaqan ee ay dhalintu horboodayso
“Ma jirto qaaciido la isku waafaqsanyahay oo ina tusinaysa in dhaqan lagu badaasho dhaqan uu yahay horumar”.
Da,ayarta oo ah cadadka ugu badan ee bulshada soomaliyeed oo qiyaastii lagu qiyaaso 70% ay si dar dar leh uga qayb qaadanaya aasal guur dhaqan oo dhab,hab labiska dhalin yarada,isticmaalka erayo qalaad,hab xiraashada timaha waa kuwa ka mid ah tuusalayaasha ugu fud fud ee ina tusin kara asal gaar ka dhaqan ee ay dhalintu hoor boodayso.
Waa sax in dadyowga dunidu ay kala dheegtaan wixii cilmi iyo horumar ah,waxaase khalad ah in dhaqan dad kale ay leeyihiin in aynu u aamino inuu yahay ilbaxnimo iyo horumar,qofba qof inta uu ka cilmi iyo aragti badan yahay ayaa uu ka hormarsan yahay kana ilbaxsan yahay.
· Doorka Dhaqanka ee Dhalin yarada
Dhalin yaradu waa dhaxayaal sugaayasha berito,dal walba waxaa uu ku dhismaa waayo aragnimda dadka waawayn iyo xooga dhalin yarada, si loo helo dhalin yaro hananka karta hoogaanka dalka waa in dhalin yaradu ay dib u milicsadaan dhaqankooda waayo dhaqanku waa baraha ugu fiican ee tusinaya tariikhda awoowayashood,qiimaha dalkooda iyo waxa ay hido u lahaan jireen.
Waa hubaal qof ka maran dhaqankiisa inuu qaadanayo dhaqan dadyow kale ay leeyihiin,soomalidu waxay ku maahmaahdaa meeshii qof ka baxo qof kale baa soo galo waa muhiim in da,ayartu ay ku baraarugto in meeshii dhaqankeenu ka baxo in uu dhaqan kale soo galayo.
F.G: waxaa ay qormadani si toos ugu socotaa da,ayarta soomaliyeed si ay ugu baraarugaan asalka guurka dhaqan,waxaa kale oo ay qormadi fariin udiraysaa dhamaan da,ayarta soomaliyeed si ay uga waantoobaan asal guurka dhaqan ee ay iyagu hormuudka u yihiin.
Dhaddig iyo laboodkiinba
Dhiska dumay ku dheeldheeshee
Dhool meel fog ka hillaacay
Dhaayaha la sii raacdee
Dhacamaha rag kale ootay
Dhaxan kaama celiyaane
Dhogortiin maxaa doorshay?
Xigasho: Afmaal xassan Cilmi
Guntii iyo gabagabadii waxaa kusoo afmeeraynaa qormadan in dhamaan bulsho wayn soomaliyeed yar iyo waynba in loo kaco sidoo loo noolayn lahaa dhaqankeena soo jireenka ah isla markaasna xooga loo saari lahaa in laga hortago in uu dhummo dhaqankeenuu oo uu noqdo mid baylah ah oo aysan cidi lahayn.
Waxaa Wada Qorey:
Cabdiqaadir Ibrahim Ahmed ( Kambale )
Cabdiraxmaan Maxamed Warsame ( Guuree ).
Emails: Geeljire1900@gmail.com & abdelrahmangure@gmail.com
BADDEENU IIB MAAHA!
Dhamaan ammaan oo dhan waxay u sugnaatay Allaah (SWT) ee nagu manaystayn nimcooyin badan oo aan xisaab lahayn iyo Rasuulkiisii suubanaa M...
WAR YAA QARAXA MAS’UUL KA AH? Dhammaan ammaan oo dhan waxay u sugnaatay Allah (SWT) ee nagu manaystay nimcooyin badan oo an...
ASAL GUURKA AFKA HOOYO IYO HABACSANAANTA U HIILINTIISA!!!! Waxaan halkan idiin kuso gudbin doona maqaal an xooga ku saarayo ififaale asa...
Rukumo qoraalada lagu daabaco halkan
Guure. Simple theme. Powered by Blogger.